Itoobiyaan loo doortay hogaaminta Hay'adda Caafimaadka Adduunka - BBC News Somali
Tedros Adhanom Ghebreyesus oo Itoobiyaan ah ayaa loo doortay in uu madax u noqdo Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO.
Wuxuu noqon doonaa qofkii u horeeyay ee Afrikaan ah ee hogaamiy Hay'addan Qaramada Midoobay ka tirsan, ka dib markii uu ku guulaystay inta badan codadkii ay dhiibteen 186 dal oo xubno ka ah hay'addan.
Wuxuu badali doonaa Margaret Chan, oo shaqada ka fariisan doonta dhammaadka bisha lixaad ka dib muddo 10 sano ah oo ay soo hogaaminaysay hay'addan caalamiga ah.
Intii ay xilkaas haysay waxaa lagu dhaliilay in uu aad gaabis u ahaa sidii ay wax uga qabatay hay'addu xannuunka Ebola oo ka dilaacay dalal Galbeedka Afrika ku yaala.
Hay'adda waxaa lagu dhaliilay in ay seegeen astaamo muhiim ah oo muujinayay baaxadda ay leedahay halista cudurkan kaas oo dilaacay bishii Desembar ee sanadkii 2013kii kaas oo markii dambana dilay 11,000 oo ruux.
Dr Tedros oo khudbad u jeediyay ergadii dooratay ayaa ballan qaaday in xaaladaha degdegga ah ee mustaqbalka dhici doona si "si hufan oo degdeg ah" wax looga qaban doono.
Waxaa kale oo uu ballan qaaday in uu u istaagi doono xaqa dadka danyarta ah.
"Jidadka oo dhan waa in ay nagu hogaamiyaan in adduunku uu helo daryeel caafimaad. Mana nasan doono inta aan arrintaas ka xaqiijinayno" ayuu sii raaciyay.
Waa kuma Dr Tedros?
Da'diisu waa : 52
Noloshiisa qoyska: Xaas iyo shan carruur ah ayuu leeyahay wuxuuna ku nool yahay Itoobiya
Dhanka kalana waa cilmi baare ku takhasusay cudurka Malaaryada oo aqoonsi calaami ah haysata, wuxuu qaatay shahaadadada ugu saraysa ee jaaamacadi bixiso ee PhD isaga oo bartay culuunta caafimaadka.
Doorashadiisu muran la'aan ma ahayn
In Tedros la doorto waxaa horay u soo dhaweeyay ururuka Midawga Afrika laakiin muran la'aan ma ahayn.
Waxaa lagu eedeeyay in uu qariyay saddex jeer oo Itoobiya uu ka dilaacday daacuun, laakiin dadka taageersan ayaa sheegay in ay tahay iskuday si ula kac ah loogu curyaaminayo.
Kooxo ka mid ah mucaaradka Itoobiya ayaa si wayn uga soo horjeeda Tedros. Waxayna ku eedeeyeen in dawladda Itoobiya ay gaysanayso tacadiyo xuquuqda aadanaha ka dhan ah ayna rumaysan yihiin in ay dawladu codka WHO ku doonayso in ay sare ugu qaaddo heerka Dublamaasiyaddeeda.
'Caddaalad maysan helin rayid lagu laayay deegaanka Soomaalida Itoobiya'
Dr Tedros ayaa sheegay in ka masauul ahaan hadafkiisu uu yahay in adduunku uu noqdo meel qofkaste u horseedda nolol caafimaad qabta oo wax soo saar leh.
Ergadii dooratay ayuu ku yiri "waxaan idiin ballan qaadayaa in aan subax walbe kici doono aniga oo ay iga go'antahay in aan isbadal sameeyo…. Diyaar ayaana u ahay in aan wax qabto.
Shanta arrimood ee ugu ahmiyad wayn shaqadiisan cusub
Casriyaynta daryeelka caafimaadka adduunka
Xaqiijinta in Hay'adda Caafimaadka Adduunku ay si degdeg ah uga jawaabto marka ay cudurradu dilaacaan ama xaalad degdeg ah timaaddo
In daryeelka Caafimaadka ee adduunku xuddun looga dhigo badqabka dumarka, dhallaanka iyo da'yarta
In dalalka laga caawiyo wax ka qabashada saamaynta isbadalka cimilada adduunku uu ku keenayo caafimaadka
Iyo in uu Hay'adda ka dhigo mid ay caddahay sida ay hawsha u wado oo lala xisaabtami karo.
Qaramda Midoobay: 7 kun oo qof ayaa lagu dilay colaada Yemen
Maqal Bidaarta oo dawo loo helay
Maqal Somaliland oo uga digtay dadweynaha inay dhowraan fayadhowrka xilligan roobabku ay da'ayaan